SP-L10M SOICARE 400ml huni tsanga hombe mhute ultrasonic Aromatherapy whit makaralı mutauri akakosha oiri diffuser, China SP-L10M SOICARE 400ml huni tsanga hombe mhute ultrasonic Aromatherapy whit makaralı mutauri akakosha oiri diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
SP-L10M SOICARE 400ml huni tsanga hombe mhute ultrasonic Aromatherapy whit makaralı mutauri kunokosha mafuta diffuser
SOICARE 400ml huni tsanga hombe mhute ultrasonic Aromatherapy whit makaralı mutauri akakosha mafuta diffuser
· [Wireless App Kudzora & V4.2 Bluetooth Mutauri]: Aromatherapy diffuser inokurumidza uye yakagadzikana kubatanidza iyo bhatiri refoni mukati me13ft. Iyo inouya ine yepamusoro stereophonic kurira & ruzha ruzha kutenderedza kuzadza mumba. Kugadzirisa Nguva, Mist Control, Music Player, Light Control muapp. Mutauri anogona kushandiswa zvakasiyana. Inoenderana ne Android 4.3+, iOS 4.0+ (Tsigira ese mhando Nhare mbozha kunze kweGoogle foni) iOS inofanira kubatidza bluetooth & kubatanidza iyo diffuser usati warodha pasi 'Aromalife' APP.
· [400ml Yakakura Kugona uye Multi-basa]: Aroma diffuser uye humidifier huviri basa, unogona kuwedzera madonhwe mashoma emafuta akakosha mumvura, mushure memasekonzi mashoma anozadzwa nekunhuwirira kwemafuta akakosha. Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza PP tangi remvura, kunyatso kudzivirira kuora kwemafuta akakosha uye kusimba. Iyi hwema inonhuhwirira inogona kugara kwemaawa gumi netangi remvura rinokwana 10ml. Yakagamuchirwa ultrasonic tekinoroji, iyi diffuser yakanyarara kwazvo kana ichishanda.
· [Kudzora Mheni]: Wood Grain Muviri uye mhango ruva remuzambiringa masiki, mwenje uye mhute inokwira ichiita kuti unzwe senge uri kugara mune inoshamisa isinganzwisisike kurota gadheni. Ruvara runogona kuchovhareswa kuburikidza kana kuriseta kune imwe yakatarwa ruvara. yakasarudzika yakatenderera yekubata skrini yekuvhenekesa interface, yakapusa kuiswa muapp, iwe zvachose uchawana mavara ekuzadzisa zvaunoda zvakasiyana.
· [Ultrasonic Kutonhora Mist Diffuser]: iyo pfapfaidzo yakanyanya kusimba uye yakapfava, inovandudza chengetedzo apo ichivandudza kunhuwirira kwemafuta akakosha pachawo Efficacy uye inopararira zvakaenzana. Isina Mvura Auto-Off Rinoshanda, Kana mvura yapera, iyo diffuser inozovhara yega. Hapana kupisa kunoshandiswa, kuchiita kuti kuve kwakachengeteka kuvana nezvipfuyo.
· [Zvipo Zvakakwana]: Kuita aromatherapy kunogona kudzikamisa kushushikana uye kushushikana, kuvandudza hupenyu hwehupenyu uye kurara. Iyi aromatherapy yakakosha mafuta diffuser inoratidzira yakanakisa yemazuva ano tsanga dzehuni, sechidimbu chekushongedza. Portable app control, mwenje yakajeka. Yakakwana yeVarume nevakadzi mudzimba uye mabhizinesi mahofisi. Icho chisarudzo chakanaka kushandisa ino yakanaka diffuser sezvipo kune shamwari dzako nemhuri, vadikani.
Mutauri weBluetooth, humidifier, aromatherapy
YEMAHARA 4L Yakakura Kukwanisa Kukura Kwemhepo Humidifier